I-Apple yongeza i-QZSS kwinkcazo ye-iPhone 7 kunye ne-7 Plus | IPhone iindaba
Yinto engaqhelekanga ukwenzeka ngolu hlobo, kodwa sele siyazi ukuba iApple iyathanda ukusothusa. Kwaye ukuba ukucaciswa yinto edla ngokunikwa ekuqaleni kokumiliselwa kwesixhobo, hayi phantse iinyanga ezine kamva, njengoko kusenzeka nge-iPhone 7 kule meko. Kwaye kunjalo ngoku U-Apple uthathe isigqibo sokuhlaziya i-iPhone 7 kunye ne-7 Plus eboniswe kwiwebhusayithi yayo ukubonisa inkxaso yeQZSS., eyaziwa ngokuba yiGPS yaseJapan. Kunika umdla oku kushukunyiswa ngu-Apple, xa eli nqaku bekufanele ukuba linikwe ingxelo kwasekuqaleni, kwaye kungekudala emva koko.
Kwiwebhusayithi yeSpanish ayikahlengahlengiswa okwangoku, Sifunda kuphela "i-GLONASS kunye ne-GPS encedisiweyo"Nangona kunjalo, ukuba siya kuhlobo lweJapan lwewebhusayithi sifumana lo mbhalo ulandelayo (esiwuguqulileyo):
Izixhobo ezifana ne-GPS yokubeka i-satellite ngendlela echanekileyo kunye ezinzileyo. Itekhnoloji ye-QZSS inokusetyenziswa ngokudibeneyo ngokudibeneyo ne-GPS, iphakamisa inani leesathelayithi ukuya kwisibhozo okanye nangaphezulu (iiziphuphutheki ezintandathu zeGPS kunye ne-QZSS ezintathu), isenza unxibelelwano luzinze ngakumbi, kunye nolona hlobo lubalaseleyo lokuma. I-QZSS iyahambelana neGPS kunye nabamkeli bayo, ikwavumela naluphi na uhlobo lokuntywiliselwa kwinqanaba le-geolocation.
Ngokweeblogi zeengcali kumxholo onje IMacotakara, oku kunokuphucula i-geolocation kubasebenzisi abavela eJapan, eya kuguqula amaxesha okulinda phakathi kwemizuzwana engama-30 kunye nesixa kwimizuzwana nje eli-15. Naluphi na uhlobo lwangaphambili kwindawo lubalulekile, ngakumbi kwindawo enezixeko ezigcweleyo ezinje ngeJapan, apho indawo inokuthi ingazinzi kwaye kube nzima ukuyisebenzisa, into engaqhelekanga mhlawumbi kukuhamba kade kwenkampani yaseNyakatho Melika yale misebenzi. .
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Ezahlukeneyo » I-Apple yongeza i-QZSS kwinkcazo ye-iPhone 7 kunye ne-7 Plus
Ndiyazibuza ukuba kutheni iApple ingakhange ibonise oku ukusuka kwangoko. Ndiyathetha, ukuba sele uyifakile kwasekuqaleni, kutheni ungakhange uthathe isigqibo "sokuyibeka esidlangalaleni" kude kube ngoku?
Ngaba ikhona into eyaziwayo malunga nenkxaso kaGalileo (i-GPS yaseYurophu apho i-EADS ithatha inxaxheba) kunye / okanye ukuba izakuyixhasa kungekudala? Enye imodeli ye-BQ sele iyenzile kwaye ithembisa ukuba ichanekile kakhulu!
UAntonio Rodriguez sitsho
Ndonwabile kwaye ndonwabile ndiyayithanda i-iphone 7 yam kwaye andikabinangxaki inye ukuza kuthi ga ngoku kungekho nto, yonke into ilungile
Phendula u-Antonio Rodriguez